Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanavaozana Vaovao: Torolàlana mijery trozona any Kanada Voasazy $10,000
Voasazy handoa onitra 10,000 dolara ny mpitari-dalana matihanina amin'ny fijerena trozona ao amin'ny Reniranon'i Campbell, araka ny Lalàna momba ny Species At Risk Act noho izy nanatona an-tsokosoko ireo trozona mpamono olona.
Tamin'ny 13 septambra 2021, tao amin'ny Fitsaram-paritany tao Campbell River, British Columbia, Kanada, dia hitan'ny mpitsara mendri-piderana R. Lamperson Nicklaus Templeman, tompona sy mpiasan'ny Campbell River Whale and Bear Excursions, samy meloka noho ny fanitsakitsahana azy roa tonta. Asan'ny jono.
Ny mpitsara Lamperson dia nandidy an'Andriamatoa Templeman handoa onitra 5,000 10,000 $ isaky ny fandikan-dalàna, XNUMX XNUMX $. Nasainy namboarina ihany koa ireo vola ireo mba hiarovana sy hiarovana ny biby mampinono an-dranomasina any amin'ny rano akaikin'i British Columbia.